हिन्दू संस्कार जागरणका लागि देशभर एकल विद्यालय स्थापना :: a1nepal.com.np
काठमाडौँ, ४ वैशाख । हिन्दू धर्मका साथै शिक्षा, संस्कार, सत्सङ्ग र स्वास्थ्यका विषयमा जनचेतना जगाउने मुलुकका ५५ जिल्लामा दुई हजार १०० एकल विद्यालय स्थापना भएको छ ।
विश्व हिन्दू परिषद् नेपालको अग्रसरतामा खुलेका यी विद्यालयमा एउटै शिक्षकले चारवटै विषयमा कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । यो कार्यक्रम ग्रामीण जिल्लामा चलाइएको परिषद्का महामन्त्री उद्धवकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । ग्रामीण भेगमा यस्ता विद्यालय खुलेपछि जुवातासलगायत विकृति रोकिएको परिषद्ले जनाएको छ ।
यी विद्यालयमा आमाबाबु, शिक्षक र मान्यजनलाई आदर सम्मान गर्नुपर्छ, आफूभन्दा सानालाई माया गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता शिष्टाचार पनि सिकाइन्छ ।
जनचेतना जगाउने उद्देश्यले अनौपचारिक रुपमा सञ्चालित यी विद्यालयमा कक्षा १ देखि ४ सम्मका चारदेखि १३ वर्षका विद्यार्थीलाई शिक्षा दिइन्छ । एउटा विद्यालयमा २० देखि ३० जनासम्म विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । देशभर ८० हजार विद्यार्थी एकल विद्यालयमा अनौपचारिक रुपमा अध्ययन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाटमा नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका परिषद्का अन्तर्राष्ट्रिय महामन्त्री चम्पक राय हिन्दू संस्कारलाई जागरण गर्ने उद्देश्यले सो संस्था स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो
। उहाँले भारतीय जनता नेपालका पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथजस्ता तीर्थस्थलको भ्रमण र दर्शन गर्न चाहने भएकाले धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनको कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महामन्त्री राय नेपालका अधिकांश तीर्थस्थल भ्रमण सकी आजै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
परिषद्का राष्ट्रिय अध्यक्ष टीका पहाडीले हिन्दुत्व संस्कृति नयाँ पुस्तामा जागरण गर्नु संस्थाको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । पचपन्न जिल्लामा खुलेका दुई हजार १०० एकल विद्यालयले हिन्दू संस्कार र संस्कृति जागरणमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको जनाइएको छ । रासस
क्याल्सियम किन आवश्यक छ ? जान्नैपर्ने कुरा एकताको प्रक्रियाबाट फर्किने पुल भत्किसक्यो : दाहाल आइएमइ र चन्द्रागिरीका मालिक चन्द्र ढकालसहित आधा दर्जन व्यापारी ‘राष्ट्रिय भ्रष्टाचारी’ घोषित ! एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने तीन दलको सहमति ९ गते सारिएको दोस्रो चरणको चुनाव फेरि असार १४ मा हुने आइतबार भैरहवामा हुने आमसभा ऐतिहासिक हुने एमालेको दाबि स्व खिम प्रसाद भट्टराई स्मृति छात्रवृत्ति बितरण कार्यक्रम सम्पन्न सुजाता कोइरालालाई ५० लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय सप्तकोशीमा डुंगा पल्टियो, ३७ को सशुकल उद्धार, केही बेपत्ता भएको आशंका अब नयाँ सरकार कसरी बन्छ ? संवैधानिक जटिलता, व्याख्या आआफ्नै
← कम छैनन् सरकारी स्कुल, यिनले धानेका छन् २९ हजार स्कुलको इज्जत	New Nepali Movie – ” Teen Ghumti ” Full Movie →